Flavour ： Ude
oday, aga m ewebata gi otu esi eme popcorn a. Ọ dị nnọọ mfe karịa ka ị chere.
Enwere naanị ihe abụọ ma ọ bụ atọ nke akụrụngwa achọrọ, ị nwere ike ịme popcorn dị iche iche dabere na mmasị onwe gị.
A aru nke crackle, na-ekiri ihe nkiri ahịhịa ejije mkpa nri, caramel nụrụ ụtọ ndị ọzọ na-atọ ụtọ.
1. Kwadebe ọka ọka na mmanụ esi nri nke dị mkpa iji mee popcorn mbụ. Obere obere ọka anyị na-eji n'oge a emee nke urukurubụba, ọtụtụ ndị agaghị azụta ha n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụrụ na ha enweghị ike ịzụta ha, ọ dị mma iji kernel ọka nkịtị dochie ha. Nke mbụ bụ itinye ọka ahụ na mmiri pọmpụ na-asacha ya ugboro ugboro, jiri obere njupụta nke leakage net drain water, tinye n'akụkụ.
2. Wepu pan nke igwe anaghị agba nchara (ọkacha mma na-abụghị mkpisi) na-enweghị mmiri na mmanụ, wee meghee ọkụ ka ọ ghee ite eghe.
3. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji butter, were bọta si na friji tupu oge eruo ma gbazee ya na okpomọkụ. Mgbe mmanụ dị ọkụ, ị nwere ike wụsa ọka niile a mịrị amị na ite ahụ, ma jiri shọvel osisi iji gbanwee ya mgbe niile, n'ihi na elu ọka adịghị ekpuchi mmanụ kpamkpam, ya mere ọ dị mfe ịrapara na ala nke ite ahụ.
4. Ji nwayọ nwayọ, ọnọdụ okpomọkụ dị n’ite ahụ na-arị elu, mkpụrụ ọka ọka ga-agbawa mgbe ọ kpụ ọkụ n’ọnụ na oke okpomọkụ. Mgbe ị nụrụ ụda Zila ma hụ ihu mgbape, ị nwere ike ikpuchi ite ahụ.
5. I nweghị ike imeghe mkpuchi ugboro ugboro mgbe ị kpuchara pan, yabụ ịkwesịrị ịkwanye pan ahụ site n'oge ruo n'oge. N'otu aka, ịkwanye ala pan ahụ ugboro ugboro nwere ike igbochi ihe ịtụnanya nke ịrapara na pan ahụ, n'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ime ka ọka ọka na-ekpo ọkụ karịa na-anọghị n'otu ebe.
Chere nkeji ole na ole, site transperent mkpuchi pụrụ ịhụ ọka zuru ezu gbawara, ike ịnụ ihe ụda nwere ike gbanyụọ ọkụ imeghe mkpuchi. A pụkwara iji bọta mee ka ekpomeekpo caramel. Sịnye ihe ngosi mmanụ na-egosi na obere efere ma hapụ ka ọ dị jụụ ntakịrị na ụlọ okpomọkụ iji nweta popcorn crispy.
Nke gara aga: Buru Sesame Popcorn na akpa
Osote: GMO Free Chinese brand popcorn INDIAM
China Prefabricated Klas, Caramel popcorn, INDIAM popcorn, Ọka agbara agba,